The Irrawaddy's Blog: MH 370 နဲ့ ပတ်သက်တာ သတင်းထုတ်ပြန် (မတ်လ ၁၆ ရက် )
MH 370 နဲ့ ပတ်သက်တာ သတင်းထုတ်ပြန် (မတ်လ ၁၆ ရက် )
မလေးရှား ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ လေယာဉ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက် တစောင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ရှာဖွေရေးတွေကို Update လုပ်မယ်ဆိုပြီး မလေးရှား ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဆက်လက် လုပ် ဆောင် သွားမယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဓိက လေယာဉ်ရောက်နေနိုင်တယ်လို့ ယူဆဲ့ ကာဇစ်စတန်၊ ဥဘက်ကစ္စတန်၊ ကီယာဂျစ်စတန်၊ တာခ်မန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ မြန်မာ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သြစတြေးလျနဲ့ ပြင်သစ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီကနေ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေက လေယာဉ် ရှာဖွေ၊ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံနေ ပါတယ်တဲ့။
မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဂြိုလ်တုက ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ အပါအဝင် သတင်း အချက် များရရှိရေး အတွက် အကူအညီတောင်းခံနေလျှက်ရှိပြီး လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေနဲ့ ခရီးသည်တွေ ကိုလည်း ရဲစုံစမ်းမှုက ဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီး မနေ့က လေယာဉ်မှူးကြီးနဲ့ တွဲဖက် လေယာဉ်မှူးအိမ်တွေကို ရဲက ရှာဖွေမှု လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအပြင် လေယာဉ် မထွက်ခွာမီ လေယာဉ်ကို စစ်ဆေးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလည်း စုံစမ်း မေးမြန်းမှု လုပ်နေ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဓိက လူထုတွေကို တောင်းဆိုအသိပေးထားတာကတော့ ရဲစုံစမ်းမှုတွေထက် ကျော်လွန်ပြီး ကောက်ချက် ချ တာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေက မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
MH370 PRESS STATEMENT BY MINISTRY OF TRANSPORT,
MALAYSIA SUNDAY, 16 MARCH 2014
b. Police searched the home of the pilot on Saturday 15 March.
Officers spoke to family members of the pilot and experts are examining the pilot’s flight simulator. On 15 March, the police also searched the home of the co-pilot.
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ထုတ်ပြန်ချက်